Sakafo tongolo 9 tsy mety diso | ThermoRecipes
Recipe 9 tsy mety diso miaraka amin'ny tongolo
Irene Arcas | 09/10/2021 11:17 | Salady sy legioma
Androany izahay dia mitondra fanangonana tena mahaliana ary, efa nolazaiko taminao, fa hahagaga anao ny fomba fahandro sasany! Anio dia avelanay eto ianao miaraka amina fanangonana lehibe Resipeo tongolo 9 tsy mety diso. Ny tongolo dia singa fototra amin'ny pantry rehetra, izay ampiasaina amin'ny fanomanana tsy misy farany, saingy azo antoka fa efa nitranga taminao fa manana tongolo be dia be ianao ary tsy fantatrao izay hatao amin'izy ireo ary efa hiharatsy izy ireo. Eto izahay, avelanay anao ny hevitra lehibe 9 mba hahafahanao (na mila mandany azy ireo ianao na tsia) dia afaka manararaotra feno ny kintan'ny kintana ao an-dakozianay sy ny pantry. Ataovy!!
1 Tongolo feno nofon-kena sy bacon
2 Akoho misy saosy tongolo sy voatabia
3 Tuna miaraka amin'ny tongolo
4 Hummus tongolo vita amin'ny caramel
5 Tongolo volomparasy namboarina
6 Famoahana tongolo
7 Tongolo vita amin'ny caramel
8 Peratra tongolo voatoto
9 Dite tongolo
Ireny tongolo feno zava-mamy ireto dia miasa nefa mora kokoa noho ny noeritreretinao… ary tena matsiro!
Akoho misy saosy tongolo sy voatabia
Lovia tsotra vita amin'ny akora fototra izay hanompo anao isan'andro.
Tuna miaraka amin'ny tongolo
Mora tokoa ny manomana ary mety tsara ho an'ireo andro ity rehefa manakaiky ny fahavaratra ary maniry ny hihinana zavatra maivana sy tsy mafana ary haingana kokoa isika.
Ny matsiro an'ity hummus ity dia zavatra tsy mampino. Manana ny tsiro amin'ny hummus nentin-drazana fa miaraka amina fika manokana momba ny tongolo vita amin'ny caramel.
Tongolo volomparasy namboarina
Fiarahana mora sy maro loko azonao ampiasaina amin'ny lovia tsy tambo isaina.
Jam tsara indrindra hanomanana sandwich na miaraka amin'ny lovia hena faharoa.
Tongolo vita amin'ny caramel
Classical sy ilaina ao an-dakozia. Ny tongolo vita amin'ny caramel dia ampiasaina hanamboarana sakafo hanina na ho haingo.
Peratra tongolo voatoto
Hafa kilasika! Aperitif izay tian'ny rehetra. Manomana ny fandroana amin'ny Thermomix izahay ary avy eo tsy mila manendasa azy ireo fotsiny.
Tsy misy isalasalana, ny fomba fahandro mahavariana indrindra amin'ity fanangonana ity. Ny tsara indrindra dia ny fisian'ity dite tongolo ity intelo isan'andro. Hanjavona tsikelikely ny tsy mahazo aina ateraky ny sery, kohaka na gripa.
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Salady sy legioma
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » lahatsoratra » Resipeo thermomix » Salady sy legioma » Recipe 9 tsy mety diso miaraka amin'ny tongolo
1 Novambra - ny fomba fanamboarana tsara indrindra ho an'ny Andron'ny Olomasina rehetra
Resipeo matsiro 9 miaraka amin'ny makamba